I-K-Tek Machining inikezela ngezinsizakalo ze-OEM / ODM kusuka efektri yethu yemishini esebenza ngokunemba ezinze eDongguang, China. Sinikeza izingxenye ezisezingeni eliphakeme zemishini yezimboni eziningi, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Singenza noma yiziphi izingxenye ngokuvumelana nezidingo zakho.
Okugxile ekukhiqizweni kwekhwalithi ephezulu i-CNC eksisi eningi ejikelezayo kanye nokugaya, singanikeza ngenkonzo yokugaya i-multi-axis ephelele nensimbi. Sisebenzise izikhungo zakamuva ze-CNC zokuchofoza umshini nokwenza izingxenye zokunemba. Izingxenye zingakhiqizwa ezintweni eziningi: Insimbi engagqwali, i-Aluminium, i-Brass nenye i-Alloy steel.
I-K-Tek ingahlinzeka ngemisebenzi yokulingisa neyenkontileka yemishini ye-CNC. Singakwazi ukukhiqiza ngezinto ezingavuthiwe ze-aluminium alloy, ithusi, insimbi engagqwali, insimbi emnene, i-zinc alloy, i-PMMA, i-Teflon njll.amakhono ethu afaka i-single & multi spindle automatics machining, i-CNC machining (ukujika, ukugaya), i-EDM, ukubopha, ukugaya, ukubhola , ukusika igiya, ukuphatha ukushisa, ukugoqa, ukufaka isobho, ukuchusha, ukugoqa intambo njll.
• Izinsiza kusebenza: I-3 axis cnc Machining, 4 axis cnc Machining, 5 axis cnc Machining, imishini ejwayelekile, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grill yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, i-Height Gauge ne-Material Analyzer njll.
Isikhathi sokusebenza esiguquguqukayo, ukwesekwa kwe-Engineering, i-ISO 9001: iqinisekisiwe ngo-2015.
Njengamanje sinabasebenzi abangama-200. Umkhiqizo wethu uthunyelwa eJapan ngama-20%, ama-60% athunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana.
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Ukuvula;
2) I-EDM yokusika izintambo / i-WEDM-HS / WEDM-LS;